कम्युनिष्ट पार्टी माक्सवादीका महासचिव श्रीनगर विमानस्थलबाट गिरफ्तार — Sanchar Kendra
२नेपालमा नैतिकताको खडेरी पर्यो- माधवकुमार नेपाल
३विप्लव र सरकारले छुट्टाछुट्टै वार्ता समिति गठन गरेपछि कांग्रेसले के भन्यो ?
४प्रचण्ड-नेपालले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई किन दिए यस्तो निर्देशन
५पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई स्वदेश फिर्ता
६आरआर क्यापम्समा प्रचण्ड-नेपाल र ओली समुहका विद्यार्थीबीच फेरि कु’टा’कुट
७कसैले हटाउन सक्छ भने हटाओस्, दुई तिहाइका साथ सिंहदरबार फर्किन्छु- ओली
८वन मन्त्रीलाई एक अर्बको घूस अफर आएको खुलासा
९ताप्लेजुङका आगलागी पीडितलाई यथाशीघ्र राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रपतिको आग्रह
१०सरकारले वार्ता टोलि गठन गरेलगत्तै विप्लवको धारणा बाहिरियो, निकाले यस्तो बिज्ञप्ति
११प्रचण्डले मन्त्री बनाइदिने अफर दिएको समाचार आएपछि सांसद श्रेष्ठले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
६भारतसँगको सिमा विवादबारे नेपाली सेनाले बल्ल मुख खोल्यो
७जनसभालाई सम्बोधन गर्दागर्दै किन रोए प्रधानमन्त्री ओली ?
९सरकारले वार्ता टोलि गठन गरेलगत्तै विप्लवको धारणा बाहिरियो, निकाले यस्तो बिज्ञप्ति
कम्युनिष्ट पार्टी माक्सवादीका महासचिव श्रीनगर विमानस्थलबाट गिरफ्तार
काठमाडौं । भारतीय प्रहरीले कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिवलाई विमानस्थलबाट गिरफ्तार गरेको छ । भारत प्रशासित जम्मु र काश्मिरका बारेमा विवाद चलिरहेका बेला मोदी सरकारले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्सवादी) का महासचिव सीताराम याचुरीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले ठुलो सफलता हात पारेको दाबि गरेको छ । सिताराम याचुरीसँगै सो पार्टीका अर्का प्रभावशाली नेता डी राजा पनि पक्राउ परेका छन् । उनीहरु दुबै जनालाई कश्मीरको श्रीनगरमा नै पक्राउ गरिएको हो ।
याचुरीले आफुहरु पक्राउ परेकोबारे सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत जानकारी गराएका छन् । खासमा याचुरी अर्का नेता युसुफ तारागामीलाइ भेट्न कश्मीरको श्रीनगर गएका थिए । युसुफ तारागामी विरामी भएकाेले उनलाइ भेट्न जानेबारे उनले पहिल्यै सरकारलाई जानकारी पनि गराएका थिए । यो उनको पूर्व निर्धारित योजना रहेको बताइएको छ । तर, जब उनीहरु श्रीनगर विमानस्थलमा पुगे, त्यहाँ उनीहरुलाइ पक्राउ गरियाे । श्रीनगर विमानस्थलबाट उनीहरुलाई बाहिर निस्कनै नदिएर पक्राउ गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।
यसैबीच भाकपा मार्क्सवादीले महासचिव याचुरीलाई गैरकानुनी रुपमा गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राखेको भन्दै विरोध गरेको छ । बिहिबार याचुरी र डी राजाले कश्मीरका गभर्नर सत्यपाल मलिकलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेर आफ्नो भ्रमणको योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । पत्रमा उनीहरुले आफ्नो भ्रमणका बेला कुनै पनि बाधा नआओस भन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यसविपरित उनीहरुलाई कुनै जानकारी नै नगराएर विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको भाकपा माक्र्सवादी बताएको छ । हिरासतबाटै याचुरीले आफूहरुले कानुनी लडाइ लड्ने बताएका छन् ।
जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० को खारेजीसँगै राज्यमा सञ्चार सेवामाथि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बिहीबार कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजादलाई पनि श्रीनगर विमानस्थलमा रोकिएको थियो । श्रीनगर जानुअघि आजादले कश्मीरीहरुसँग सडकमा खाना खाइरहेका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको कडा आलोचना गरेका थिए । कश्मीरमा गएको ५ अगस्टदेखि यता पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु महबूबा मुफ्ती र उमर अब्दुल्लासहित ५०० भन्दा स्थानीय नेताहरुलाई पक्राउ गरिएको छ ।
बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरी नागरिकलाई भयभित नहुन आग्रह गरेका थिए । उनले आउँदो सोमबार रहेको ईद पर्वको शुभकामना दिँदै ईद पर्व मनाउन कश्मीरीहरुलाई कुनै अप्ठेरो नपर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए । कश्मीरमा रहेका अधिकारीहरुका अनुसार शुक्रबार पनि नमाजका लागि भन्दै कर्फ्यु केही खुकुलो पारिने छ । बिहीबार मात्रै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गुलाम नवी आजादलाई पनि विमानस्थलबाट बाहिर निस्कन रोक लगाइ दिल्ली फिर्ता गरिएको थियो।
आइतबार रातिदेखि कस्मिरको सुरक्षा कडा पारिएको र सञ्चार साधनहरुलाई पूर्ण अवरुद्ध पारिएको छ। शुक्रबार भने मुस्लिम समुदायको प्रार्थनाका लागि केही खुकुलो पारिएको छ । यसैसाता सरकारले कश्मिरलाई विशेष दर्जाको राज्यका मान्यता दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गरेको थियो । जम्मु तथा कस्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्दै केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरिएको थियो । लद्दाखलाई छुट्टै प्रशासकीय इकाइ बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।